Global Voices teny Malagasy » Fianarana Mandritra Ny Fialantsasatry ny Fahavaratra: Hoavy Ny MOOCs · Global Voices teny Malagasy » Print
Fianarana Mandritra Ny Fialantsasatry ny Fahavaratra: Hoavy Ny MOOCs
Voadika ny 31 Mey 2014 16:08 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Morris Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Efa mby akaiky ny fialan-tsasatry ny andro mafana (any amin'ny ila-bolantany avaratra) saingy mbola afa-mianatra amin'ny MOOC efa eo am-panatanterahana sy izay mbola hoavy ianao. Indreto sasany hitanay tsara jerena :
Teknolojia sy ny Etika (Fitsipi-pitondra-tena) 
Ny fihanaky ny teknolojia ampiasana eo amin'ny andavan'androm-piainantsika mba hahazoana tombotsoa, fahefana, na fanatsarana ny fiainan'ny tsirairay dia mety hiteraka rarintsaina ara-kolontsaina sy fanamby ara-pitsipi-pitondratena. Ao amin'ity fampianarana ity, hitrandraka ny fomba ahafahana mahatakatra, mahafehy sy manamaivana izany fiantraikany amin'ny endriny marobe izany isika. Efa nanomboka tamin'ny 19 mey ny fampianarana saingy mbola afaka manatevin-daharana ianao!
Mahatakatra ny lazain'ny fampitam-baovao amin'ny alalan'ny fahatakarana (ny fiasan'ny) Google 
Vitsy ny olona “mi-google azy fotsiny” no hahita ny ny valinteny isaky ny misy fanontaniana sy mahazo an-tsaina izay ataon'ny orinasa (sy ny antony). Amin'ny alalan'ity fampianarana ity, hanatevin-daharana ireo vitsy an'isa izay tena mahazo izany ianao. Efa nanomboka tamin'ny 26 mey – mbola afaka miditra ianao!
Famoronana Fandaharan'asa Hoan'ny Media Nomerika sy ny Fampiharana amin'ny Finday. Creative Programming for Digital Media & Mobile Apps 
Hoan'izay rehetra te-hanana talenta ara-teknika amin'ny asa mila fahaiza-mamorona miainga amin'ny lalao video, mandalo amin'ny fametrahana zavakanto ary tonga amin'ny mozika “interactive”, ary hoan'ireo mpanakanto te-hampiasa fandaharan'asa informatika eo amin'ny fomba fanatanterahany ny kanto artistikany. Manomboka amin'ny volana Jiona.
Tantaran'ny Aterineto, Teknolojia ary ny Fiarovana 
Inona no atao hoe Aterineto? Ahoana no fomba nananganana izany? Ahoana no fomba fiasany? Ahoana no fomba hananantsika fifandraisana voaary ato amin'ny aterineto? Hanomboka amin'ny 2 Jona.
Fitaovam-Piasan'ny Mpahay Ara-tahirinkevitra 
Fantaro amin'ny ankapobeny ny tahirin-kevitra (rakitra), ny fanontaniana ary ny fitaovana iasan'ny mpanadihady ny rakitra (tahirinkevitra) sy ny mpahay ara-tahirinkevitra. Ity no andiam-pampianarana voalohany ao amin'ny Fandalinana Manokana ny Siansan'ny Rakitra Johns Hopkins. Hanomboka amin'ny 2 Jona.
Famoronana Kaody Creative Coding 
Ity fampianarana ity dia mampiditra ny fandaharan'asa informatika ho toy ny fitsipika vaovao mamokatra feo, sary, fanentanana sy ny tsy voatanisa. Hanomboka amin'ny 2 Jona.
Ny Adobe Creative Apps Fundamentals Week 
Mianatra ny fomba fampiasana ny fampiharana ®Adobe mahery vaika Creative Cloud amin'ity andiam-pampianarana mampihatra sy lesona misy fanontaniana sy valiny, ary manokana ny andro iray manontolo isaky ny fampiharana Adobe iray goavana – Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, Dreamweaver, ary After Effects.
Raha hijery ny fampianarana amin'ny fararano :
Siansan'ny Tranonkala: Ny fanovana nentin'ny tranonkala teo amin'izao tontolo izao 
Mitrandraka ny fanovana nentin'ny habaka teo amin'izao tontolo izao tao anatin'ny 25 taona lasa sy izay hitranga manaraka. Hanomboka amin'ny 6 Oktobra.
Fanadihadiana Ny Tambajotra Sosialy: 
Hampiasa ny fanadihadiana ny tambajotra sosialy ity fampianarana ity, na eo amin'ny teoria na eo amin'ny fitaovana informatika, mba hanomezan-danja ny tambajotra sosialy sy ny tambajotram-baovao izay efa novelomina sy azo nidirana tamin'ny alalan'ny aterineto. Hanomboka amin'ny 9 Oktobra.
Sary avy amin'ny One Laptop Per Child tao amin'ny Flickr, (CC-BY-2.0)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/05/31/60253/
 Teknolojia sy ny Etika (Fitsipi-pitondra-tena): https://www.coursera.org/course/techethics
 Mahatakatra ny lazain'ny fampitam-baovao amin'ny alalan'ny fahatakarana (ny fiasan'ny) Google: https://www.coursera.org/course/googlemedia
 Famoronana Fandaharan'asa Hoan'ny Media Nomerika sy ny Fampiharana amin'ny Finday. Creative Programming for Digital Media & Mobile Apps: https://www.coursera.org/course/digitalmedia
 Tantaran'ny Aterineto, Teknolojia ary ny Fiarovana: https://www.coursera.org/course/insidetheinternet
 Fitaovam-Piasan'ny Mpahay Ara-tahirinkevitra: https://www.coursera.org/course/datascitoolbox
 Famoronana Kaody Creative Coding: https://www.futurelearn.com/courses/creative-coding
 Ny Adobe Creative Apps Fundamentals Week: https://www.creativelive.com/courses/adobe-creative-apps-fundamentals-week
 Siansan'ny Tranonkala: Ny fanovana nentin'ny tranonkala teo amin'izao tontolo izao: https://www.futurelearn.com/courses/web-science-2014-q3
 Fanadihadiana Ny Tambajotra Sosialy: : https://www.coursera.org/course/sna